Mpanamboatra Telecom | China Telecom Factory & mpamatsy
Fanamafisam-peo RF & Microwave Power bidirectional
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny fanamafisam-peo Bidirectional RF & Microwave Power amplifier. Ao amin'ny Pandawill, takatray ny fahasarotana sy ny fanamby amin'ity indostria ity, ka izany no nahatonga anay ho manam-pahaizana amin'ny serivisy fanodinana elektronika (EMS) amin'ny fifandraisan-davitra.
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny fitaovana fampielezana Bidirectional. Ao amin'ny Pandawill, takatray ny fahasarotana sy ny fanamby amin'ity indostria ity, ka izany no nahatonga anay ho manam-pahaizana amin'ny serivisy fanodinana elektronika (EMS) amin'ny fifandraisan-davitra.
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny tabilao Optical Networking. Ao amin'ny Pandawill, takatray ny fahasarotana sy ny fanamby amin'ity indostria ity, ka izany no nahatonga anay ho manam-pahaizana amin'ny serivisy fanodinana elektronika (EMS) amin'ny fifandraisan-davitra.